Imizekelo yencwadana yesazisi yenkampani: into abayiyo kunye neminye imizekelo | Abadali be-Intanethi
Kukho uhlobo lweekhathalogu okanye iimanyuwali ezisebenza kwiprojekthi yoyilo lophawu oluthile. Isigaba sesazisi senkampani siyanda kwimfuno ngabaqulunqi abaninzi. Kwaye kungenxa yesi sizathu ukuba badinga incwadana esebenza njengomzekelo kwaye ebonisa yonke inkqubo yokwenza kunye nokuyila uphawu oluthile.
Kukho iimanyuwali ezininzi ezikhoyo, zonke ziyilelwe ukuba zisebenze kwaye zidlulise umyalezo. Kule post, sifuna ukugxininisa ukubaluleka kwezi ncwadana kwicandelo loyilo lwegraphic. Ukwenza oku, siya kukubonisa imizekelo ecacileyo kwaye siya kuchaza kwangaphambili ukuba ziphi na, ukwenzela ukuba xa ugqiba ukufunda le post, awunaso isizathu sokungayila ngokwakho.
1 Incwadi yesazisi: yintoni na
2 Izinto zencwadana
2.5 ukusetyenziswa kakubi
3 Imizekelo yeencwadana zezazisi
Incwadi yesazisi: yintoni na
Umthombo: i-adn studio
Incwadi yesazisi yenkampani ebonwayo eyaziwa ngokuba yincwadana ye-ICV. Luhlobo lwesixhobo, esifana nekhathalogu encinci okanye incwadana, apho uphuhliso lophawu luqikelelwa kuphela. Yindlela elungileyo okanye enye indlela yokubonisa uyilo oluthile lophawu. Inoxanduva lokuqokelela izinto eziphambili ekufuneka zithathelwe ingqalelo ekuphuhlisweni kophawu: iifonti, imibala, iisimboli, iilogo, izinto zokubhala zenkampani, ukufakwa kwebrendi kwimidiya yentengiso okanye kwimvelaphi yeefoto, njl.
Kwakhona Eminye imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo ibandakanyiwe, njengamaxabiso ophawu. Ngale nto sinika uluntu lwethu ithuba lokusazi ngcono kunye nokuqonda into esiyenzayo kunye nendlela esisebenza kunye nokunxibelelana ngayo. Ngoko ke, ngezantsi, sibhale uluhlu lweempawu ekufuneka zonke iincwadana zithathelwe ingqalelo kwaye kufuneka zibe nazo ukuze uyilo lwayo lwenziwe ngokuchanekileyo kwaye lusebenze ngokupheleleyo kunye neenjongo zalo.
Iincwadana nazo zinenjongo okanye owona msebenzi uphambili we ngcono ukuthumela umyalezo ukuba uphawu lufuna ukunika. Ngale ndlela sigcina ixesha ekwenzeni iinkcazo ezinde malunga nenkampani kwaye sizisekela kuphela kwezona nkalo zibalulekileyo nezifanelekileyo.
Umfanekiso esiwunikelayo kumxhasi ubuchwephesha ngakumbi kwaye, ngamnye wabaxumi bethu unokwazi uphawu lokuqala kwaye alubone lumelwe kwiindawo ezahlukeneyo. Ngale ndlela sikwazile ukunika inkalo enenyani ngakumbi kuphawu luphela.
Enkosi kuyilo lwezi ncwadana zemigaqo, asikuphela nje ukuba sikwazi ukubonelela ngenkalo ebaluleke ngakumbi kunye neyobuchule yohlobo lwethu, kodwa sikwafumana uphawu ukuba lutsalwe ngabathengi bethu kwaye sifumane ixabiso elingcono kwimarike. xa siyilas, sikwabeka uphawu lwethu kwicandelo elithile. Ngoko ke, kubalulekile ukuba kuthathelwe ingqalelo into nganye ekufuneka imelwe. Ewe, umxhasi uhlala ethatha inyathelo lokuqala kwaye nguye oxabisa iprojekthi yethu. Ngamafutshane, kufuneka sibe nayo yonke into elawulwayo kwaye ilungelelaniswe kakuhle, ngale ndlela umntu ofunda incwadana yethu kwaye ayibone akufuneki ukuba alahleke phakathi kwezinto ezahlukeneyo.
Ilogo yeyona nxalenye ibalulekileyo yencwadana. Ukwenza oku, kufuneka sichaze ukuba zeziphi izinto ezibandakanyiweyo kwi-brand yethu (ukuba zikhona). Kufuneka sichaze ngokweenkcukacha hayi kakhulu izinto ezibandakanyiweyo kunye nento nganye ebonelela ngayo kwinkampani yethu njengeenqobo zenjongo.
Ngexesha lesi sigaba sencwadana, eminye imiba iyabandakanywa, njengemilinganiselo ehambelanayo yophawu okanye izithuba zokhuseleko oluya kuba nalo uphawu lwethu xa luvezwa kwezinye izinto. Ukongeza kokubandakanya iinguqulelo ezimbini ezihambelanayo: uguqulelo oluthe tye kunye noluthe nkqo.
Ukuchwetheza yenye into esiyithathela ingqalelo xa siyila uphawu. Ngenxa yesi sizathu, kwincwadana yemigaqo kuyimfuneko ukucacisa ukuba yintoni i-typography esetyenzisiweyo kwaye kutheni. Xa sibhala okanye sichaza ukuba kutheni, kufuneka sikhumbule amaxabiso achazwa yile typography malunga nohlobo lwethu. Ubuntu kunye nomlingiswa elinikezelayo kunye nombono oya kuba nawo lo mbhalo ngokuchasene nesiphumo sokugqibela soyilo lwethu.
Imiba enjengokuboniswa okupheleleyo kochwethezo nazo zithathelwa ingqalelo: ngoonobumba abakhulu, abancinci, amanani kunye nezigxininiso eziphambili. Ngokufutshane, chaza ukuba kutheni ikhethwe njengolona hlobo lochwethezo luphambili.
Xa sithetha ngemibala sibhekisa kumaxabiso echromatic okanye imibala yeshishini lophawu. Njengokuchwetheza, kuyafuneka ukuba uchaze ukuba yeyiphi imibala eyona nto iphambili yophawu kwaye yeyiphi eyesibini. Kuyo, siya kuyila i-palette ngemibala ehambelanayo kwaye sinako ixabiso lamanani okanye ikhowudi yombala ngamnye kuzo zombini i-RGB kunye ne-CMYK.
Kwesi sigaba, ukusetyenziswa kophawu kumaxabiso angalunganga kunye namabi kunye nakwimibala ephezulu kuthathelwa ingqalelo. Ngale ndlela sinokubona uphawu luvezwe kwimvelaphi emnyama okanye ekhanyayo enemibala.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo zizicelo. Nanini na xa sisithi izicelo, sibhekisa kwindlela esibhenca ngayo uphawu kwezinye imidiya. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zezicelo, kodwa kuqhelekile ukufumana uphawu kwizicelo ezinemvelaphi yezithombe. KUNYEKule nqanaba, zombini imvelaphi ekhanyayo kunye nemvelaphi emnyama ithathelwa ingqalelo. I-brand iphinde ifakwe kwizinto zokubhala zenkampani: iileta kunye namaphepha enkcazo, iimvilophu zaseMelika, amakhadi oshishino, iincwadana okanye iifolda, njl.
Phakathi kwezinye izigaba ezininzi, usetyenziso olungachanekanga lwe-brand kufuneka luvezwe okanye lumelwe ukuze abanye abasebenzisi abasebenza nathi bazi indlela yokuguqula uphawu lwethu. Ukwenza oku, siya kwenza usetyenziso olungachanekanga olwahlukileyo kwaye siya kuzivelela kwincwadana yemigaqo, ezinye zezona zinto zingaqhelekanga zokusetyenziswa zihlala: umbala webhrendi utshintsha ngombala ongeyonkampani okanye omele, i-deformation yesimboli okanye i-logo, ukujikeleza kwe-brand, utshintsho lwe-typography engekho yenkampani, utshintsho lokusasazwa kwezinto kwi-logo, njl.
Ezi zibe zezinye zezinto ezibandakanyiweyo kwincwadana, azikho zonke ukususela ekubeni uphawu lwenziwe ngeempawu ezininzi.
Imizekelo yeencwadana zezazisi
Umthombo: uyilo lwe-G-tech
Eyona nkampani iphumeleleyo yokusasaza kule minyaka yamva nje izifumene inesidingo sokuyila incwadi yesazisi yohlobo lwayo. Ngale nto, iNetflix ibheja ngemibala yayo emibini yeshishini: ubomvu obunzulu obunika amandla kunye namandla kwi-logo kunye nomnyama kwimvelaphi eyenza i-logo ibonakale kwezinye iziqalelo. Ngokufutshane, incwadana yemigaqo emangalisa kakhulu.
Umthombo: Intengiso yePixel
Omnye wabo bazibandakanya ekuyileni imanyuwali yi-Unicef. Ingxowa-mali ehlangeneyo yabantwana isebenze iminyaka emininzi ukuze ibe yeyona arhente imele abantu abaninzi. Kangangokuba, baye bomeleza uphawu lwabo, beyila incwadi yesazisi ngenjongo yokuqonda intsingiselo emva kwelogo. Ukwenza oku, baye banemibala yabo ephambili yenkampani: isibhakabhaka esibhakabhakeni, esipinki, esityheli esiqaqambileyo, esiluhlaza okwesibhakabhaka esimnyama kunye nomnyama. Uluhlu lwemibala eyahlukayo enye kwenye kwaye enikezela amaxabiso abonelelwa yi-brand.
ISpotify ngoku yeyona nkampani iphumeleleyo yeenkonzo zemultimedia. Ngoku bangaphezulu kwezigidi ezi-5 abantu abasebenzisa iSpotify ukumamela iingoma abazithandayo. I-brand nayo imele kakhulu, ke ngoko, bayila imanyuwali ngeminye yemibala yeshishini emele uphawu: uhlaza olunika ubomi obuninzi kunye nentsingiselo kwi-brand, umhlophe kwimvelaphi emnyama kunye nomnyama kwimvelaphi yokukhanya eyenza ukuba uninzi lwe logo lubonakale. Ngamafutshane, incwadana ebandakanya eminye imiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngexesha loyilo lophawu.
IMicrosoft ikwayenye yeebrendi eziye zajoyina ukuyila eyayo incwadi. Kwaye akunakulindelwa ukuba iya kuba yimibalabala, kuba uphawu ngokwalo lugcina imibala ecace kakhulu kwilogo yalo: oluhlaza, bhlowu cyan, orenji tyheli kunye nobomvu. Incwadana iqokelela ezinye zezona nkalo zibalaseleyo ngexesha lokuyila kunye nophuhliso lwe-brand: imibala yenkampani, i-typography yenkampani, inkcazo yophuhliso kunye noyilo lwento nganye ebonakalayo kunye nemizobo, njl. Indibaniselwano egqwesileyo yoyilo.
Iincwadana zesazisi ziya zisanda izinto zeenkwenkwezi ukumela uphawu ngokupheleleyo. Njengoko sele sibonile, kuyimfuneko kwaye kubaluleke kakhulu ukuba incwadana iquke inkalo nganye, enokuthi, nangona incinci okanye ingabalulekanga, kufuneka imelwe ngasemva kwamaphepha.
Siye sabona ukuba iibrendi ezininzi zibonelele ngoyilo olwahlukileyo lweencwadi zabo. Kuyinyani ukuba i-brand nganye inikezela ngeenkalo ezahlukeneyo kunye nomboniso ohlukeneyo wezinto kuyilo lwabo, kodwa ngamnye kubo ubonisa uphuhliso kunye nenkqubo yokudala uphawu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imizekelo yencwadana yesazisi yenkampani
Iinkqubo ezilungileyo zokuhlela iividiyo